Filtrer les éléments par date : mardi, 18 août 2020
Mankalaza ny faha-52 taona nijoroany ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara na FJKM. Endrika samihafa no nankalazan’ny Fiangonana sy ny mpino FJKM izany androany.
Teo ny fanompoam-pivavahana ny saika isam-pitandremana manerana ny Nosy, nisy koa ny fizarana fanomezana, izay hahitana entana ilaina andavan’andro sy ny arovava…, ho an’ireo tsy manam-piahy toy ny kamboty sy ny mananontena.
Nisafidy ny hanao asa soa ny filoha lefitry ny FJKM teo aloha Marc Ravalomanana sy ny ankohonany, ka nanolotra fanampiana izay nahitana vary, menaka, yaourt, ronono, ranomboakazo, dibera ary koa fromazy ho an’ny Akany Avoko Faravohitra sy ireo ankizivavy beazina sy taizana ao.
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a remis ce jour des lots de matériel informatique aux ministères de la Défense nationale, et de la Sécurité publique, au Sécrétariat d’Etat à la gendarmerie et à l’Assemblée nationale.
Cet appui, financé par le fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix (UNPBF), s’inscrit dans les efforts du Système des Nations Unies à Madagascar pour promouvoir un secteur de la sécurité qui contribue au maintien de la paix, et respectueux des droits humains et redevable.
Cet appui vise aussi à contribuer au renforcement de la confiance de la population Malagasy dans les forces de défense et de sécurité (FDS).
mardi, 18 août 2020 18:38
DRENETP Vakinankaratra: Hiverina an-tsekoly ireo mpianatra kilasim-panadinana
Raha tsy misy toromarika vaovao dia hiverina an-tsekoly ireo mpianatra amin’ny kilasim-panadinana rehetra manerana an’i Vakinankaratra manomboka amin’ny alatsinainy 24 aogositra ho avy io, araka ny filazana navoakan'ny Foibem-paritry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy arak'asa Vakinankaratra.
mardi, 18 août 2020 18:33
Covid19: Natokam-ponenana ireo mpianatra 41 nody eto Maroantsetra
Mpianatry ny oniversite ao Toamasina miisa 41 no afaka nody eto Maroantsetra, rehefa nahazo fankatoavana avy amin’ny CRCO Atsinanana sy CRCO Analanjirofo.
Natokam-ponenana ao amin’ny EPP Androkaroka izy ireo harahi-maso ara-pahasalamana noho ny fisian’ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Nanao taratasy fanekena tsirairay avy rahateo izy ireo, fa hanaja ny fepetra ara-pahasalamana hisorohana ny fihanaky ny Covid-19.
Salama avokoa izy 41 mianadahy taorian’ny fizaham-pahasalamana natao azy ireo teo ampahatongavana. Nilaza izy ireo fa vonona hanaraka ny lamina.
mardi, 18 août 2020 18:29
Cisco Nosy Be: 2 735 ireo voasoratra anarana hiatrika ny CEPE
Miomana amin’ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana CEPE izay hotanterahina ny 1 septambra 2020 ireo fari-piadidiam-pampianarana na Cisco manerana ny Nosy.
Ho an’ny Cisco Nosy Be dia miisa 2 735 ireo mpiadina voasoratra anarana hiatrika ny CEPE. 09 taona no zandriny indrindra amin’ireo mpiadina, ary 17 no zokiny indrindra.
Hitsinjara amin'ny foibem-panadinana enina ireo mpiadina ireo.
mardi, 18 août 2020 18:28
Malagasy tavela any Inde: 248 ireo nisoratra anarana hody
248 ireo Malagasy tavela any Inde nisoratra anarana fa hody an-tanindrazana. Ny sidina MD8161 an’ny Air Madagascar no haka azy ireo any an-toerana. Ny alakamisy 20 aogositra amin’ny 3ora maraina no hianga ao Mombay ny fiaramanidina hiazo an’i Madagasikara.
Miantoka ny sarandalana izay hody. 799 dolara na 3 tapitrisa Ariary eo ny tapakila iray avy any Inde miazo an’i Madagasikara amin’ity sidina manokana ity.
Ity no andiany faharoa amin’ny fampodiana an-tanindrazana ireo teratany Malagasy tavela tany ivelany, hotaterin’ny Air Madagascar taorian’ireo 233 tonga ny faran’ny herinandro teo avy any Eorôpa, noraisina tao Marseille sy Paris.
Atao fitiliana PCR izy ireo vao migadona eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, ary atokam-ponenana avy hatrany miandry ny valin’ny fitiliana azy ireo.
Hifandona mandritra ny lalao manasadalana voalohany, anio alina, amin’ny fiadiana ny Tompondakan’i Eorôpa ny klioba RasenBallsport Leipzig sy Paris Saint-Germain Football Club.
Samy teratany alemana i Julian Nagelsmann sy Thomas Tuchel mpanazatra an’ireto klioba roa ireto. Mpilalao teo ambany saokan’i Thomas Tuchel i Julian Nagelsmann, ary mbola i Thomas Tuchel no nahatonga an’i Julian Nagelsmann ho mpanazatra.
Ankoatra ireo klioba hiady ny tapakila famaranana dia hifampitana koa ny mpianatra sy ny mpampianatra anio.
mardi, 18 août 2020 12:54
FJKM: feno 52 taona katroka
Feno 52 taona katroka amin’ity andron’ny faha-18 aogositra 2020 ity ny nahaterahan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM).
Hanatanteraka fanompoam-pivavahana ny saika isam-pitandremana manerana ny Nosy sy any andafin-driaka ho fankalazana ny tsingerintaona.
Ao anatin’ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana noho ny fisian’ny valanaretina ny fanaovana izany.
Hizara fanomezana, izay hahitana entana ilaina andavan’andro sy ny arovava…, ho an’ireo tsy manam-piahy, toy ny kamboty sy ny mananontena miisa 4 000 eo ihany koa ny mpino protestanta amin’ny alalan’ny tsapaipaika.
Vondrona ara-tantara miisa telo samihafa no nitambatra ho iray ka nanome ny FJKM.